Akụkọ Bible: Mgbe Jizọs Nọ n’Ime Ubi A Gbara Ogige - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
MGBE ha si n’ime ụlọ ahụ dị n’ụlọ elu ahụ pụta, Jizọs na ndịozi ya jere n’ogige Getsemeni. Ha abịawo ebe a ọtụtụ ugboro n’oge gara aga. Jizọs gwara ha ugbu a ka ha mụrụ anya, na-ekpekwa ekpere. Jizọs wee pụtụ n’ihu nke nta, kpudo ihu ya n’ala iji kpee ekpere.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Jizọs bịaghachiri n’ebe ndịozi ya nọ. Gịnị ka i chere ha na-eme? Ha na-arahụ ụra! Ugboro atọ ka Jizọs gwara ha ka ha mụrụ anya, ma n’oge ọ bụla ọ bịara, ọ hụrụ ha ka ha na-arahụ ụra. ‘Olee otú unu ga-esi na-arahụ ụra n’ụdị oge a?’ ka Jizọs jụrụ ha n’oge ikpeazụ ọ bịaghachiri. ‘Oge eruwo ka e nyefee m n’aka ndị iro m.’
N’oge ahụ, a nụrụ mkpọtụ nke oké ìgwè mmadụ. Leenụ! Ndị ahụ ji mma agha na osisi na-abịa! Ha jikwa ọwá ndị a mụnyere ọkụ na ha iji na-enye ha ìhè. Mgbe ha ruru nso, otu onye wee si n’ìgwè mmadụ ahụ pụta jekwuru Jizọs. O wee sutu ya ọnụ, dị ka ị na-ahụ ebe a. Nwoke ahụ bụ Judas Iskarịọt! Gịnị mere o ji sutu Jizọs ọnụ?
Jizọs jụrụ ya, sị: ‘Judas, ì ji isutu ọnụ na-arara m nye?’ Nsutu ọnụ ahụ bụ ihe mgbaàmà. O mere ka ndị so Judas mara na ọ bụ ya bụ Jizọs ahụ ha na-achọ. Ndị iro ya wee pụta ijide ya. Ma Pita agajeghị ịgbachi nnọọ nkịtị ha eduru Jizọs. Ọ mịpụtara mma agha o ji wee gbuo onye nọ ya nso. Mma agha ahụ egbuteghị isi nwoke ahụ, ma o bepụrụ ntị aka nri ya. Ma Jizọs metụrụ ntị nwoke ahụ aka, wee gwọọ ya.
Jizọs ewee gwa Pita, sị: ‘Mịghachi mma agha gị n’ọbọ ya. Í cheghị na m pụrụ ịrịọ Nna m ka o zite ọtụtụ puku ndị mmụọ ozi ka ha bịa zọpụta m?’ Ee, Jizọs pụrụ ime otú ahụ! Ma ọ rịọghị Chineke ka o zite mmụọ ozi ọ bụla, n’ihi na ọ maara na oge eruwo mgbe ndị iro ya ga-ejide ya. N’ihi ya, o kwere ka ha duru ya pụọ. Ka anyị hụ ihe a ga-eme Jizọs ugbu a.
Matiu 26:36-56; Luk 22:39-53; Jọn 18:1-12.
Olee ebe Jizọs na ndịozi ya gara mgbe ha si n’ime ụlọ nke ụlọ elu ahụ pụta, gịnịkwa ka ọ gwara ha ka ha mee?
Gịnị ka Jizọs chọpụtara mgbe ọ laghachiri n’ebe ndịozi ya nọ, ugboro olekwa ka nke a mere?
Ole ndị batara n’ime ubi ahụ a gbara ogige, gịnịkwa ka Judas Iskarịọt mere, dị ka anyị na-ahụ na foto a?
N’ihi gịnị ka Judas ji sutụ Jizọs ọnụ, gịnịkwa ka Pita mere?
Gịnị ka Jizọs gwara Pita, gịnịkwa mere na Jizọs agwaghị Chineke ka o zite ndị mmụọ ozi?
Gụọ Matiu 26:36-56.
Olee otú ụzọ Jizọs si dọọ ndịozi ya aka ná ntị si bụrụ ezi ihe nlereanya nye ndị okenye ọgbakọ taa? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32)
Olee otú Jizọs si lee mmadụ iji ngwá ọgụ lụsoo mmadụ ibe ya ọgụ anya? (Mat. 26:52; Luk 6:27, 28; Jọn 18:36)
Gụọ Luk 22:39-53.
Mgbe otu mmụọ ozi pụtara n’ihu Jizọs n’ogige Getsemeni iji wusie ya ike, nke ahụ ọ̀ na-egosi na okwukwe Jizọs esighịzi ike? Kọwaa. (Luk 22:41-43; Aịsa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Hib. 5:7)
Gụọ Jọn 18:1-12.
Olee otú Jizọs si chebe ndịozi ya pụọ n’aka ndị na-emegide ya, oleekwa ihe anyị pụrụ ịmụta site na nke a? (Jọn 10:11, 12; 18:1, 6-9; Hib. 13:6; Jems 2:25)